Cwangcisa inani lee-CPU ukukhawulezisa iPC ehamba kancinci
I-PC yakho inokuba neprosesa engundoqo okanye iiprosesa ezininzi. Qinisekisa ukuba iWindows ithatha ithuba lokuqhubekeka kwamandla kwaye, ukuba akunjalo, yilungise. Eli ziko lifumaneka kuphela kwiWindows 7 nakwiWindows Vista. Ngokudabukisayo, eli qhinga alifumaneki kwiWindows XP.
Landela la manyathelo ukuseta inani leeprosesa ezisetyenziswa yiWindows kwiPC yakho:
1Vula ibhokisi yencoko yencoko.
Cinezela u-Win + R okanye ucofe usebenze kwi-Start Menu.
MbiniChwetheza msconfig kwaye cinezela u-Enter.
KwiWindows Vista, kuya kufuneka ucofe iqhosha lokuqhubeka okanye uchwetheze igama lomlawuli.
Inkqubo yoqwalaselo lwefestile iyavula.
3Cofa kwiTebhu ithebhu uze ukhethe Izinketho eziphambili iqhosha.
Ibhokisi yencoko yababini yoPhuculo oluPhambili iyavela.
4Beka uphawu lokutshekisha ngenani labaprosesa kwaye ukhethe elona nani liphezulu kwiqhosha lemenyu.
Elona nani liphezulu ngokudibeneyo linani leeprosesa ngaphakathi kwiPC yakho.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yababini evaliweyo iyavala.
6Cofa ku-Kulungile kwiWindows System yoqwalaselo.
Inkqubo yoqwalaselo iwindow iyavala.
7Cofa ukuqala kwakhona ngoku.
Utshintsho alwenzeki de uqale ikhompyuter kwakhona.
Unokukhetha ukuphuma ngaphandle kokuqalisa kwakhona, kwimeko apho utshintsho lwenzeka ngexesha elizayo xa uqala kabusha iPC.
Ukunyusa intsebenzo kwi-PC yakho ukuseta inani elifanelekileyo leeprosesa kusenokungabonakali, ubuncinci kungabonakali. Kodwa ubuncinci ngokulandela la manyathelo, uyaqinisekisa ukuba iiWindows zisebenzisa izixhobo zekhompyuter zekhompyuter ezingcono kunangaphambili.
Jonga iVidiyo 241 ukujonga la manyathelo asebenzayo.
iziphumo ebezingalindelekanga zespiriva
ukufunda intetho yezandla kwabaqalayo
Elona xesha lilungileyo lokuqalisa ifandesi ye-ebay
Ndifowunela umnxeba kwi-itunes
Imephu yokuqhuba kwiifestile ezili-10
idiphenhydramine yedosi yabantwana mg / kg